पत्रकार बिरादरीको नेतृत्वमा परिणामको प्रतीक्षा
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिपत्रकार बिरादरीको नेतृत्वमा परिणामको प्रतीक्षा
आज कन्टिर–बाबूलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको ताजा नेतृत्व चयन गर्ने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन आँखाअगाडि सम्पन्न अनुभव रह्यो । कन्टिर–बाबू यस अवसरमा सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद र प्रतिस्पर्धामा सहभागी सबैलाई आगामी दिनका लागि शुभकामना दिन्छन् ।
ऐतिहासिक यस अर्थमा कि आज पहिलोपटक सबै पत्रकारहरूले आफ्नो सबै तहको संरचनाका लागि भुक्किँदै–ओर्दै भए पनि प्रत्यक्ष मतदान गर्नुको अनुभव बटुले । यस विशिष्ट अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका सबै सदस्यले भावनामात्र होइन, विवेकका आधारमा मतदान गरे भन्ने कन्टिर–बाबूको अपेक्षा छ । यो भनाइ कुनै उम्मेदवारको नारासँग मिलेछ भने त्यसलाई अन्यथा नमान्न कन्टिर–बाबू सुझाउँछन् ।
त्रकारले आफ्नो बिरादरीको अगुवा कसलाई, के आधारमा गर्ने चयन गरे होलान् ? विचार र सिद्धान्तका आधार कि आफूले राम्ररी चिनेका आधारमा गरे ?
अब बात रह्यो पत्रकारले आफ्नो बिरादरीको अगुवा कसलाई, के आधारमा गर्ने चयन गरे होलान् ? विचार र सिद्धान्तका आधार कि आफूले राम्ररी चिनेका आधारमा गरे ? त्यो भने कन्टिर–बाबू सोचिरहेका छन् ।
बाँकी समयले थाहा दिने कुरा भयो । भविष्यका लागि नेतृत्वमा आम पत्रकारहरूले जे हुनुपथ्र्यो त्यही वा सुधारका अवसरहरू छोडेर निर्णय गरे ? त्यो भने कन्टिर–बाबू अहिल्यै कुनै कुनै टिप्पणी गर्न चाहँदैनन् ।
परिणाम सार्वजनिक भएपछि गर्नेछन् । कन्टिर–बाबूलाई अपेक्षित परिणामको व्यग्र प्रतीक्षा छ ।
नेतृत्व चयन पत्रकार बिरादरी